Laba Qodob oo RW Rooble ku qasbaya inuu xilka ka qaado Guddoomiyaha Guddiga Doorashada (Qormo) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Laba Qodob oo RW Rooble ku qasbaya inuu xilka ka qaado Guddoomiyaha Guddiga Doorashada (Qormo) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Laba Qodob oo RW Rooble ku qasbaya inuu xilka ka qaado Guddoomiyaha Guddiga Doorashada (Qormo)
Waxaa mar kale soo shaac baxday saameynta ay madaxweynaha Xilkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo kooxdiisa ololaha Doorashada ee uu hoggaamiyo Fahad Yaasiin ku leeyihiin Guddiyada Doorashada.
Qoraalkii shalay la faafiyey ee Guddiga Doorashada Heer Federaal iyo Guddiga Doorashada maamul Goboleedyada ku shaaciyeen inay la hakiyeen Doorashadii iyagoo diidan xil ka qaadista iyo qaabkii loola dhaqmay xubno ka mida Guddiga Xalinta Khilaafaadka wuxuu ahaa mid caddeyn u ah in Guddiyada Doorashooyinka ay kooxda Farmaajo u sameysatay si ay Doorashada dhinacooda ugu dhacdo, taasoo muddo dheer soo socotay, laakiin hadda natiijadeeda la wada arkayo.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Heer Federaal Maxamed Xasan Cirro oo la xaqiijiyey inuu qoraalkii shalay qeyb ka ahaa, isla markaana toos uga amar qaato Villa Somalia, wuxuu hadda noqday bartilmaameedka labaad ee la filayo inuu xilka ka qaado Ra’iisal wasaare Rooble, kadib tallaabadii uu ku eryay 7 xubnood oo ka mid ahaa Guddiga Xalinta Khilaafaadka.
Waxaa meesha ka baxday wada-shaqeyntii yareyd ee u dhaxeysay xubnaha Guddiga Doorashada ee Heer Federaal, iyadoo laba garab loo kala baxay oo qaarkood sida Guddoomiyaha iyo xubno kale ay Villa Somalia la safan yihiin, halka qeybta kale ay Ra’iisal wasaaraha iyo Maamul Goboleedyada taageerayaan.
Guddiyada Doorashada Maamul Goboleedyada Heer Federaal ayaa sidoo kale kala baxay, waxayna laba ka mida oo kala ah: Galmudug iyo K/Galbeed taageersan yihiin dhinaca kooxda Farmaajo, halka Jubbaland iyo Puntland ay Rooble dhinaciisa jiraan, balse Hirshbeelle u dhaxeyso.
Wuxuu kaloo qoraalkii shalay bannaanka soo dhigay sida Guddiyada Doorashada ugu nugul yihiin madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa Maamul Goboleedyada, wuxuuna mar kale soo nooleeyay loolan Farmaajo iyo Rooble ku doonayaan inay ku maamulaan.
Ra’iisal wasaare Rooble wuxuu ku qabsan yahay inuu xilka qaado Guddoomiye FIET Maxamed Xasan Cirro oo marka hore awoodi waayey inuu dhexdhexaad isu muujiyo, marka labaadna hanan waayey xubnaha Guddiga uu guddoomiyaha u yahay. Waxaana taasi u dheer inuu adeegsanayo Musharax gaara.
Waxaa xilligan u haboon Ciro inuu xilka iska casilo, inta aanu Ra’iisal wasaare Rooble xilka ka qaadin, sida ku dhacday xubnaha Guddiga Xalinta Khilaafaadka, si xaalad cusub loogu jiheeyo Guddiga kala qeybsan.
Maxamed Xasan Cirro
Previous articleWararkii ugu danbeeyay ee Dagaalka ee Boosaaso iyo Ciidamada PSF oo xaafad cusub ku faafay..
Next articleMareykanka oo War kasoo saaray Dagaalka ka socda Magaalada Boosaaso